Mashandisiro Aungaita Yako B2B Yemagariro Midhiya Strategiki Inofanira Kusiyanei neB2C Strategy | Martech Zone
Mashandisiro Aungaita Yako B2B Yemagariro Maseru Isu Inofanira Kusiyanei neB2C Strategic
Svondo, Kurume 27, 2016 Svondo, Kurume 27, 2016 Douglas Karr
Sezvo iwe uchiramba uchiverenga nezve masocial media matekinoroji online, yakawanda yeruzivo yemagariro marongero anotarisana nebhizinesi-kune-mutengi (B2C). Asi pane misiyano mikuru pakati peB2C neBusiness-to-Bhizinesi (B2B) mazano. Ngatikurukurei zvimwe zvacho:
Sarudzo-Mugadziri - nepo danho rekutenga reB2C richigona kuve nematanho mapfupi uye richienderana nemutengi kana vaviri vari kutenga, zvisarudzo zvebhizinesi zvinowanzove nematanho mazhinji ekubvumidzwa uye kutenderera kwenguva refu.
Results - kana mutengi akaita sarudzo yakaipa yekutenga, zvirango zvacho zvakasiyana zvakanyanya nebhizinesi. Muzvinabhizimusi anogona kurasikirwa nekuvimbwa nevatungamiriri vavo, anogona kurasikirwa nebasa ravo, uye anogona kurasikirwa nemari kana purofiti kana chigadzirwa kana sevhisi ikasaita pane zvinotarisirwa.
vhorumu - nepo mibairo yemubhadharo inogona kunge yakafanana, iro vhoriyamu inofanirwa kusangana nezvinangwa zvekutengesa zvinowanzosiyana zvakanyanya. Vatengi veB2B vanowanzo shanda pane diki, rakanyanya kutarisirwa boka revatarisiri.
chipo - mapfupi ekutenga macircuit uye akakwirira mavhoriyamu anoda zvakanyanya kushambadzira uye kushambadzira kuedza. B2B inoda kushambadzira kukuru uye kushambadzira, asi zvakanyanya kuda timu yekutengesa inoshamisa kuti ubvunze mutengesi uye uvabatsire. Uye kwete nekutengesa chete, asi kuvabatsira nehunyanzvi hwavo hwebhizinesi. Vatengesi vanhu vanovimbwa mazano uye chinhu kune indasitiri yavo ndivo vanobudirira kwazvo.
ichi chinyorwa kubva kuStout Social inotsanangura huwandu hwakawanda wemaitiro anodikanwa kuti ubatanidze yakabudirira B2B social media zano.
Neimwe chikonzero, makambani mazhinji eB2B akatambura kuti abate kushambadzira midhiya enhau kana kufuratira akaregeredza. Kunyangwe paine budiriro yakaonekwa nemakambani eB2C nemasocial media, makambani eB2B achiri kuvimba nemaitiro echinyakare sekufona nechando uye kuenda kunzvimbo dzekudyira dzemabhizimusi. Matekiniki iwayo achiri kushanda, asi haafanire kushandiswa panzvimbo yemagariro enhau. Panzvimbo iyoyo, iwe unofanirwa kuve uchibatanidza vezvenhau muchirongwa chako chemhedzisiro iri nani. Dominique Jackson, Nyuka Nharaunda
Inofanirwa Sei Yako B2B Yemagariro Midhiya Strategy Yakasiyana?
zvinangwa - zvinangwa zveB2B yemagariro enhau anotarisisa izwi, traffic, lead uye shanduko. Iro zano revatengi rinowanzo tarisa pamusika, kukura kwevateereri uye nemanzwiro. Mune mamwe mazwi… kunangana nevhoriyamu.
nzira - zvemukati, kusimudzira, uye analytics ndiwo tarisiro yeB2B yemagariro midhiya zano. Iro zano revatengi rinogona kutarisa kuvimbika kwechiratidzo, kushandira vatengi uye kuvaka nharaunda.
gutsikana - B2B zvemukati zvakagadzirirwa kudzidzisa uye kukurudzira vateereri vekambani kuvaka kuvimba netariro. Iro zano revatengi rinoshandiswa kuvaka chiziviso chechiratidzo uye kukura kwavo online nharaunda.
Tags: b2bb2b magariro enhaub2b maringe b2c midhiya enhaub2cb2c magariro enhaumutongi-sarudzoDominique Jacksontarenda rekutengesamagariro enhauzvemagariro midhiya zano mhedzisiropasocial media vhoriyamukutengesa munharaundasocial kutengesa zanobukira munzanga